Wariye katirsan BBC-da oo qaati ka taagan Al Shabaab | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Wariye katirsan BBC-da oo qaati ka taagan Al Shabaab
Wariye katirsan BBC-da oo qaati ka taagan Al Shabaab
Way adag tahay in wariye ajnabi ah uu xiriir la sameeyo xarakada Al Shabaab, balse wariyaha katirsan BBC-da waxay la sameysay xiriirka ugu badan, si ay uga hesho macluumaad la xiriira weerarrada ay geystaan.
Mary Harper oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ahayd tifatiraha wararka BBC-da ee Afrika ayaa ka sheekeysay dhibaatada ay ku qabto Al Shabaab, inkastoo ay sheegtay in wali aysan kala kulmin wax halis ah.
“Wax walaac ah oo aan Al Shabaab ka qabo malahan dhankooda, balse aad ayay isoo wacaan marwalba, si ay igu soo gudbiyaan wararka la xiriira xaaladda Soomaaliya, mararka qaarna waan dhibsadaa in aan la hadlo, inkastoo ay qayb ka tahay shaqadeyda”, ayay tiri Mary oo la hadashay laanta af Soomaaliga ee BBC-da.
Mary ayaa sidoo kale BBC-da u sheegtay in wali aysan wax hanjabaad ah kala kulmin xarakada Al Shabaab, balse ay dhibsatay wicitaanka joogtada ah ee ay la soo sameeyaan.
“Marnaba wax hanjabaad ah kala ma kulmin sababtoo ah xiriikii ina dhexmaray aniga iyo Al Shabaab wuxuu ahaa mid khadka taleefoonka, mana joogo meel ay ka ag dhawa yihiin”, ayay raacisay Mary.
Waxa kale oo ay sheegtay in Al Shabaab ay marwalba ogyihiin safarada ay ku tagto Soomaaliya iyo dalalka dibadda, iyadoona tiri “waxay marwalba si sax ah igu sheegaan dadkii aan kula kulmay magaalada Muqdisho, waxayna taasi i dareensiisa hadaladii aan ka maqli jiray dadka Soomaalida ee ah, Al Shabaab meel walba ayay joogaan, mana garan kartid inay iyaga tahay cidda aad la joogtid”.
Mary ayay BBC-da ka wax ka weydiisay waxyaabaha wanaaga ee ay ka xusuusato hadaladii ay Al Shabaab ku yirahdeen marka ay soo wacaan ayay tiri:
“Waxaan ka xusuusta marka ay wax iga weydiiyeen xaaladeyda caafimaad, iyo mar aan booqasho ku tegay dalka Nigeria oo intay ogaadeen safarkeyga ay igu yirahdeen dalkaas waa dal khatar badan ee aad uga taxadar oo is ilaali, iyagoo iga soo wacay Soomaaliya oo ah dal ka khatar badan Nigeria”.
Sarkaalkan katirsan Al Shabaab ee soo waca ayay Mary Harper sheegtay in uu yahay qof si wanaagsan ugu hadla luuqadda Ingiriiska, oo wuxuu u sheegay in uu ka bartay dhageysiga BBC-da qeybta Ingiriiska.
Mary waxa kale oo ay sheegtay in ay aad uga baraan degto safar walba oo ay ku tageyso Soomaaliya, oo dadka ogna ay yihiin kuwa ay sheegtay inay ku kalsoon tahay, baraha bulshadana aysan soo dhigin maclumaad la xiriira safarada ay ku tegto gudaha Soomaaliya, balse sidaas oo ay tahay, Al Shababaab waay ka warramaan dhaq-dhaqaaqeeda.
Way iga badbadiyeen oo qaati ayaan ka taaganahay, maxaa yeelay aad ayaan u qariyaa safar walba oo aan ku tago Soomaaliya, dad aad u kooban ayaa ku wargeliya safarkeyga, waxaan sidoo kale damiyaa dhamaan akoonada aan ku leeyahay baraha bulshada marka aan tago Soomaaliya,”ayay Mary ku tiri wareysi ay siisay BBC-da.
“Marnaba si furan uga ma hadlo qorshaheyga safaraka oo waxaan ku wargeliyaa laba la taliye oo dhanka ammaanka. Haddaba side Al Shabaab ku ogaadeen dhamaan macluumaadkaas oo dhan” ayay raacisay Mary.
Sarkaal Al Shabaab u qaabilsan dhanka waraabhinta ayay Mary Harper sheegtay in uu ku wargeliyay inay la socdaan meel walba oo ay tagto, waxaana uu yiri ‘Dad aya inoogu jira dowladda, laamaha ammaanka, hay’adaha iyo warbaahinta oo wax walbo inoo soo gudbiya’.
Tifatiraha BBC-da ee wararka Afrika ayaa waxa kale oo ay sheegtay in sarkaalkan katirsan Al Shabaab uu weydiiyay bal in ay ka fikirtay inay qaadato diinta Islaamka, waxayna intaas raacisay in uu isku dayay inay qaadato diinta Islaamka.
Wariye Mary Harper oo u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa aad ula macaamiisha Soomaalida, waxayna aad u booqatay magaalooyin Soomaaliyeed oo ay kamid yihiin Muqdisho, Baydhabo iyo deegaanada Somaliland. Waxay sidoo kale sheekooyin badan ay ka qortay xaaladda Soomaaliya iyo ganacsiga Soomaalida ee geeska Afrika.
Waxay sidoo kale qortay buuq ay ugu magac dartay “Getting Somalia wrong” oo ay kaga hadashay khaladaadka ay isleedahay waa laga fahmay Soomaalida iyo sida Soomaalida ay ugu wanaagsan yihiin ganacsiga, oo haddii laga dhex bixi lahaana ay xalin karaan dhibaatooyinka heysta, iyadoona tusaale usoo qaadatay maxkamadaha, oo ay sheegtay inay lix bilood ku xalliyeen dhibaatada Soomaaliya.
Previous articleDeg Deg :- Taliyayaasha Ciidamada Booliska Iyo Military-ga Somaliland Oo Ka Hadley Xaladii Deg Deg Aheyd Ee Shalay Madaxweyne Biixi Soo Saarey